Ihe na-emepụta Spur Gear | Akwa mma & teknụzụ dị elu - Ever-Power
Gearbox nke Ugbo
Igwe ajị Ọkpụkpụ
Harmonic Gear mbanye
Spire Bevel Gear
Tinye onu ogugu
Aro & pole & njikọ
PTO Drive aro
Oge eriri oge
Vortex Gas mgbapụta
Hicgbọ ala Na-eduzi Akpaghị Aka
Ngwunye mkpuchi ihu
Nchịkọta Ihe Ịntanetị
Akụkọ & Blog
Mbido / Gear / Spur Gear
Ngwurugwu Spur bụ ihe a na-ahụkarị nke ọma na-ebugharị n'etiti oghere abụọ dị n'otu. N'ihi ọdịdị ha, a na-ekewa ha dị ka ụdị nke cylindrical gears. Ebe ọ bụ na akụkụ ezé nke gia dị ka anyụike nke oghere ndị a rụnyere, ọ nweghị ikike a na-agbanye na ntụgharị axial. Ọzọkwa, n'ihi ịdị mfe nke mmepụta, enwere ike ịme mgbatị ndị a na oke nkenke. N'aka nke ọzọ, mkpịsị akụrụngwa nwere ọghọm n'ihi na ha na-eme mkpọtụ ngwa ngwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, mgbe esemokwu abụọ dị na ntupu, a na-akpọ gear na ọtụtụ ezé "gear" na onye nwere obere ọnụ ọgụgụ ezé a na-akpọ "pinion".
Dị ka otu n'ime ndị ọkachamara ọkachamara na-emepụta ngwa ahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa na China, anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka ị zụta ma ọ bụ zụọ ahịa nnukwu ahịa na China mere site na ụlọ ọrụ anyị.
Họchaa site na ewu ewu Chọpụta site na nke kachasị ọhụrụ Họchaa site na price: ala elu Họchaa site na price: elu ala
Plastic Spur Kwadobe
Spur Kwadobe (European Standard)
Anyị bụ otu n'ime ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ngwa ahịa na China, họrọ ndị na-emepụta ihe dị mma, ndị na-ebubata ya, na-ebupụ ya na EVER-POWER.NET
Anyị bụ ọkachamara na mmepụta nke Gearbox, PTO Shafts, Sprockets, Fluid Coupling, Worm Gear Reducers, Gears and racks, Roller Chains, Sheave and Pulleys, Planet Gearboxes, Timing Pulleys, Shaft Collars and more.
2001-2020 Otu ike mgbe niile
N'elu ozi bụ naanị maka ịkekọrịta ihe ọmụma na iwebata ngwaahịa na ndị nrụpụta. na-abụghị nke azụmahịa nzube. Ihe ọdịnaya niile sitere na netwọkụ ahụ, isiokwu ahụ bụ echiche anyị, ọ bụrụ na enwere mmebi iwu nke ikike nwebisiinka ma ọ bụ na ịchọta ozi na-adịghị mma, biko kpọtụrụ m, anyị ga-ehichapụ ya ozugbo. Ojiji nke nọmba ndị na-emepụta akụrụngwa (OEM) nke akara nọmba ma ọ bụ ụghalaahịa, dịka John Deere® Comer Gearbox ® Bush Hog Gearbox® Omni Gear® wdg. Companylọ ọrụ anyị na akụkụ ndị edepụtara edepụtara dị n'ime ebe a anaghị akwado OEM.